पहिलो पटक जातीय विभेद गर्नेलाई जेल चलान - News36media
जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुद्दामा गुल्मीमा पहिलो पटक जिल्ला अदालतले पीडकलाई ३ महिना जेल सजायको फैसला गरेको छ । जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–५ फोक्सिङ्गका नेत्रबहादुर काउछा मगरलाई छुवाछुत तथा जातीय विभेद गरेबापत् न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतिको ईजालासले ३ महिना जेल सजायको फैसला गरेको हो ।
घटनाबारे समाचार प्रकाशित भए लगतै स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका दलित अधिकारकर्मीहरु न्यायको पक्षमा एकजुट भएका थिए । उनीहरुले पीडकविरुद्ध नेपालीलाई अदालतमा जतीय विभेद तथा छुवाछुतको मुद्दा हाल्न लगाएका थिए । सोही अनुरुप चलिरहेको बहसका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका काउछालाई ६० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो ।
यसबारे फैसला गर्दै न्यायाधीश उप्रेतीले मगरलाई ३ महिना कैद सजाय, ५० हजार जरिवाना र १० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको अदालतका मेलमिलापकर्ता गणेश विश्वकर्माले जानकारी दिए । जिल्लाका अगुवा दलित अधिकारकर्मीसमेत रहेका विश्वकर्माले जिल्लामा जातीय विभेद विरुद्धको मुद्दामा जेल सजायको फैसला सुनाइएको यो पहिलो घटना भएको बताए ।
काउछाले आगामी ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने मौका पाउने छन् । त्यस अवधि नाघे लगतै उनलाई पक्रेर जेल चलान गरिने अदालतले जनाएको छ । ३ वर्षअघि मुसिककोट नगरपालिका–४ बडागाउ हलोगाडेका कर्णबहादुर नेपालीलाई घरको भाडा छोएको आरोप लगाउँदै स्थानीय राजु कार्की र उनकी आमाले मरणासन्न हुने गरी कुटेका थिए । उनीहरु विरुद्ध मुद्दा परे पनि जनही २५ हजारका दरले धरौटीमा छाडिएको थियो ।
सरकारी अस्पतालले गेटबाटै फ’र्कायो, निजीमा लैजाने पैसा न’हुदा ग’र्भवतीको मृ’त्यु !
भर्खरै काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट आयो फेरी अर्को दुखद खबर !
June 2, 2020 June 2, 2020 News36media
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर बाट अत्यन्तै दुखद खबर ! सबैलाई सावधान रहन आग्रह
June 18, 2020 June 18, 2020 News36media
May 11, 2020 News36media